Battlelands Royale 1.7.4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.7.4 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Battlelands Royale
Battlelands Royale ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အကျွမ်းတဝင် Battle Royal ON ~ တစ်ဦးက Crazy FUN Twisted ~
multiplayer တိုက်ပွဲ Royale ရပ်နေနောက်ဆုံးလူမော်ကွန်းထဲမှာရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအဘို့စစ်တိုက်ခြင်း - မဟုတ်ကိုသင်သိအဖြစ်!
မိုဘိုင်းအတွက် လုပ်. , Battlelands Royale လူတိုင်းခံစားရန်အဘို့အပေါ့ပေါ့တိုက်ပွဲ Royale ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ 32 ကစားသမားများနှင့် 3-5 မိနစ်တိုက်ပွဲများနှင့်အတူကသန့်စင်သော non-stop ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခြင်းပဲ! ဧည့်ခန်းထဲမှာအဘယ်သူမျှမစောင့်ဆိုင်း; သွားလာရန်မရှုပ်ထွေး menus တွေ။ ရုံ, လေထီး play, များကိုလည်းသိမ်းယူ, shoot နဲ့ရှင်သန်!
ကွဲပြားခြားနားသောတိုက်ပွဲ mode တစ်ခုအကြီးအကျယ်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူ, Battlelands Royale ပေါ့ပေါ့နှင့်ပိုပြီးမကြာခဏဂိမ်းကစားဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်တော်အတွက်နယ်ပယ်တွင်လွှမ်းမိုးသို့မဟုတ်ဆိုပြီးအတွက်သူချင်း battlers နှင့်အတူတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်း။ သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းသုံးယောက်နှင့်ကစားသမားအတွက်ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာယူနှင့်အတူရေးအဖွဲ့ထ!
တိုက်ပွဲပွဲများ Play နှင့်သင်၏ရန်သူတို့ကိုသို့ကြောင့်လိမ့်မည် wow သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့သပိတ်ကိုကွောကျရှံ့အံ့သြဖွယ်အက္ခရာများလေထီး, Emotion နှင့်တိုက်ပွဲအလံများသော့ဖွင့်ဖို့ကိုမူလစိန်ခေါ်မှုများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်။
စူပါရိုးရှင်းသောထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်မကြာမီသင်ကစားပွဲကိုဒေါင်းလုဒ်င့်အဖြစ်မီးသငျသညျအဆင်သင့်ရှိပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ဆင်းသက်ပွဲချင်းပြီး Choose အတွက် drop, လက်နက်နှင့်လက်နက်များကိုလည်းသိမ်းယူနှင့်သင့်အသက်တာ၏ရန်ပွဲအဘို့အဆင်သင့်ရ! အဆိုပါ Hideout, သင်္ဘော, ဝင်္နှင့် Trainyard တူသောကြောက်မက်ဘွယ်တည်နေရာနှင့်အတူကြီးမားတဲ့မြေပုံပေါ်တွင်ထုတ်တိုက်ဖျက်။ သင်ပင်ပါတီဒစ္စကိုမှာဆင်းပေါ်တွင်သို့မဟုတ် Mansion ၏ကြီးစွာသောခိုင်ခိုင်လုံလုံစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်သင် Camper ရဲ့ပရဒိသုကွာဖုံးကွယ်လိမ့်မယ်? မည်သို့ပင်သင့်ရဲ့မဟာဗျူဟာ, မုန်တိုင်းအားဖြင့်ဖမ်းမိရဘူး!
သငျသညျ play သကဲ့သို့သင်တို့ XP ကိုရရှိမှုနှင့်တက်အခုလဲအားဖြင့်ပိုပြီးစိတ်ကြိုက်အကြောင်းအရာနှင့်အထူးအရေခွံသော့ဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ ပို. ပင်ဆုလာဘ်များအတွက်တိုက်ပွဲ Pass ကိုရယူပါနှင့်သင့်သူချင်း battlers များ၏ငြူစူခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ဖိနပ်အတွက်လှုပ်ခြင်းနှင့်သူတို့အိမ်တွင်တည်းခိုချင်ပါတယ်လိုကြလိမ့်မည်ဟုရှားပါးခြင်းနှင့်ဒဏ္ဍာရီဇာတ်ကောင်တွေနဲ့သူဌေးရဲ့သောရန်သူတို့ကိုသင့်ပြရန်! သင့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကို upgrade နှင့်ခြေရာနှင့် Mele လက်နက်များများအတွက်အပိုဆောင်းစိတ်ကြိုက် slot နှစ်ခုသော့ဖွင့်ဖို့ကတ်များစုဆောင်းပါ။ သင်တစ်ဦးအိမ်သာ plunger အသုံးပွုနိုငျသောအခါအဘယျကွောငျ့အလက်သီးနှင့်အတူစစ်တိုက်ခြင်း ?!
သေနတ်များအမျိုးမျိုးနှင့်အတူသင့်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကျွမ်းကျင်မှုစုံလင်ခြင်းနှင့်မြို့ထဲတွင်အကောင်းဆုံး battler ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သင်စနိုက်ပါ, ShotGun, ရိုင်ဖယ်သို့မဟုတ်ပစ္စတိုကိုရွေးချယ်ကြမည်နည်း အထူး minigun, bazooka နှင့် quadzooka များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ပေါက်ထောက်ပံ့ဖို့အပြေးပြိုင်ပွဲမှသတိရပါ!
အဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေဟာပျော်စရာနဲ့ဇာတ်ဆောင်အနုပညာစတိုင်လ်နဲ့ကောက်-Up-and ကစားဂိမ်းကသငျသညျကိုချမထားချင်မည်မဟုတ်ကြောင်းမိုဘိုင်းပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဂိမ်းစေရန်ပေါင်းစပ်ဘယ်မှာ Battlelands Royale, ၌သင်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်း။
စစ်တိုက် Royale ။ မိုဘိုင်းတွင်။ ညာဘက် Done ။ ဤသည် Battlelands Royale ဖြစ်ပါတယ်။
BATTLELANDS Royal အင်္ဂါရပ်များ:
- လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှကစားသမားဆန့်ကျင်အချိန်နှင့်တပြေးညီမြန်ဆန်စွာတပြေးညီ 32-PERSON ကို Battle!
- TEAM သည် PLAY! အသင်းကိုသူငယ်ချင်းများကိုအတူတက်နှင့်ကစားသမားအတွက်နယ်ပယ်တွင်ပေါ်ယူ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးသူချင်းတိုက်ပွဲကို Buddy တယောက်နှင့်အတူတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းနှင့်ဆိုပြီးကစား။
- Mega ဆုလာဘ်! သငျသညျထမြင့်အဖြစ်အသစ်သောစာလုံးများ, Emotion နှင့်လေထီးစုဆောင်းပါ။
- CHARACTER upgrade! သင့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုတက်မြင့်မှကတ်များကိုစုဆောင်းသင်အကောင်းဆုံးနေသက်သေပြကြောင်းအံ့သြဖွယ် customisible သော့ဖွင့်!
- Battle အဖွစျအပကျြ! ပို. ပင်အံ့သြဖွယ်ဆုများရရှိရန်ဆွဲဆောင်မှုစိန်ခေါ်မှုများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်!
- သီးသန့် Battle PASS, CONTENT! အလွန်အကောင်းဆုံးဆုလာဘ်သော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်တိုက်ပွဲ Pass ကိုအတူနယ်ပယ်၌သူတို့ကို flaunt ။
- စူးစမ်းဖို့ကြီးမားတဲ့ဂိမ်းကိုမြေပုံ။ ရှေးခယျြသငျ့ရဲ့ဧရိယာသို့လေထီးနှင့်သင့်ဆင်းသက်ထိန်းချုပ်ထားသည်။
- လက်နက်နှင့် Med ပစ္စည်းများအပါအဝင်များကိုလည်းသိမ်းယူဖို့လက်နက်နှင့်ပစ္စည်းများ၏တန်ချိန်,!
- supply မှလူမျိုး bazookas, miniguns နှင့် quadzookas တူသောအထူးရှားပါးလက်နက်များရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။
- ပြဇာတ်ဧရိယာကျုံ့။ မုန်တိုင်း၏ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေဖို့!
အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? Battlelands Royale ၌သင်တို့ကိုကြည့်ပါ။ #LootShootSurvive ။
Battlelands Royale ကစားဘို့အ Thank you! ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်ဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးဆဲနေနှင့်သင့်တုံ့ပြန်ချက်ဂိမ်းရဲ့လမျးညှနျပုံဖော်ပေးနိုင်သည် - က bug တွေသို့မဟုတ်အင်္ဂါရပ်အတွေးအခေါ်များရဲ့ရှိမရှိ, contact@futureplaygames.com မှတဆင့်သူတို့ကိုငါတို့လမ်းပေးပို့နိုင်ပါသည်ဒါ။
စိတ်တိုးပွားနှင့် Facebook ပေါ်တွင် Battlelands အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်မထားပါနဲ့။
Battlelands တရားဝင်ကစားသမား '' Group မှ: https://www.facebook.com/groups/battlelandsplayers/
Battlelands Facebook စာမျက်နှာ: https://www.facebook.com/battlelandsroyale
Battlelands Royale အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Battlelands Royale အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Battlelands Royale အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
welee စတိုး531.21k
Battlelands Royale ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Battlelands Royale အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.7.4
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.futureplaygames.com/privacypolicy
လက်မှတ် SHA1: 8A:89:08:A2:DB:9F:A9:F6:0B:41:36:5D:89:8B:4F:80:6B:F6:A4:87
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Mika Rahko
အဖွဲ့အစည်း (O): Futureplay
Battlelands Royale APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ